I-Recipe ye-"Ngulube I-Carbonate" evela kwintambo yenkukhu
Ukukhwabanisa Okuvela kwinqwelo yenkukhu, iinxalenye zeenyama ezigcobileyo zikhumbuza kakhulu isakhiwo senyama yengulube ye-ngurube kunye ne-fat-fat fat-fat. Ukusetyenziswa kwe-starch kwi-frying yenyama kuxhaphake ekuphekeni kweTshayina. Le nqubo ikuvumela ukuba ulondoloze ijusi yenyama. Ukutya, ndasebenzisa umgubo wengqolowa, kodwa umgubo oqhelekileyo wengqolowa ufanelekile. Isitashi sithatha ingqolowa, "sincinci" kwaye sinomthenda ngakumbi kunezambatyambo.
Inkukhu ye-Chicken 350g
Umqolo wesinqe 4 g
Uhlaza, ingqolowa 30 g
Ioli ye-sunflower ecocekileyo i-sun mllar 20 ml
Ukuqhathaniswa kwenkomo 1 g
Isinyathelo 1 Lungiselela iimveliso eziyimfuneko: i-flet fillet, imon, i-soda kunye netyuwa.
Isinyathelo 2 Geza iflethi yenkukhu. Sika kwiinqununu ezinkulu. Yongeza ityuwa kunye nesoda. Phala umso Ukuphendulwa kwesiqhwithi kuya kuqalisa. Emva koko wongeza isitatshi, ugxotha inyama ngezandla zakho uze ufake efrijini imizuzu eyi-15.
Inyathelo lesi-3 Emva koko qhawula umqongo ngamnye kumgubo uze uwubeke kwi-pan yokutshisa, udibanise ioli.
Inyathelo 4 Fry ngaphezu kokushisa okuphezulu kumacala omabini kude kube nzima.
Inyathelo 5 Ukukhonza kushushu okanye kushushu.
Inkukhu kwi-marinade enomnandi nelomuncu
Inkukhu kunye nama-mushroom kunye nepilisi elimnandi
Inkukhu ye-Chicken kunye nama-pancake ama-potato kunye ne-chutney
Inkukhu ihamba ngeapula
Amaphiko enkukhu kwi-honey-soy marinade
Amagqabi kunye nezandla ziqhumisa kubanda
Ukubhalisa kwigumbi lomntwana ngosuku lokuzalwa
U-Chelka - ubuhle bemfashini-2016
Ukutolika kwamaphupha: liphi iphupha leenqununu
Iziboniso, abantu abavakalayo, izidakamizwa. Ngubani na?
Cake nge sorrel
Amaqanda aqhekekileyo aphekiweyo kunye nemifino
Zonke iimfihlelo ze geisha